Kushambadzira Kucherekedza Spans ZVIRI KUWANDA, kwete Kudzikira! | Martech Zone
Kushambadzira Kucherekedza Spans ZVIRI KUWANDA, kwete Kudzikira!
China, July 20, 2006 Muvhuro, Mbudzi 14, 2016 Douglas Karr
Ndichiri kutarisira yakananga yekushambadzira dhipatimendi, ini ndaiwanzo kuudza vatengi kuti iyo nguva yakareba yavanofanira kutora tarisiro yekutarisisa yaive yakanangana zvakananga nenhambo yenguva yaitora kufamba kubva kubhokisi retsamba kuenda kudoti remarara. Ndichiri kutenda ichokwadi. Ini handizive kuti ini ndinotenda kuti vatengi 'kutarisisa spans yakadzikira pamusoro pemakore, sevakakundikana vatengesi vanga vachichema nezve, zvakadaro.
Ini ndinotenda kuti kukura kwemasvikiro kwakashandura vatengi kuita kwakanyanya kutarisisa, kwete zvishoma. Kwatinoona uku ndiko kufarirwa kwezvirongwa zvakadai se Chinyorwa chaAngie, Epinions, Kubhuroka, Amazon Ongororo, nharaunda dzepamhepo, nezvimwe. Vanhu vari kuisa simba rakawanda mukukurukura zvigadzirwa nemasevhisi avanoda nekuvenga. Rudzi irworwo rwekutarisisa rwakanyanya kukosha pane kutarisa iyo 60-yechipiri nzvimbo muSuperbowl. Iko kune bhizinesi rinobudirira rakaputirwa nerevo yevatengi.
Aya maforamu ekunyunyuta evatengi ane huwandu hukuru hwemotokari zvakare. Mumwe muenzaniso unoshamisa weyekutarisisa ndeyekupinda blog apo munyori akanyorera uye akatumira kuyedza kwake kudzima account yake yeAOL. Yakagamuchirwa mazana ezviuru zvehits. Fungidzira kuti imhandoi yemari iyo AOL yaizofanira kubhadhara kune yakadaro mhando zvakanaka kucherechedza! Marii yakadii yekusimudzira yakarasika pane ino yakarekodwa?
Mune mumwe muenzaniso, David Berlind anotumira kurekodha kwake kwemaminetsi gumi nematatu kufona na T-Mobile, waakabhadhara naye (kunze kwenyaya yake yakajairika) yeasina waya yekuwana panhandare uye akatadza kubatana. T-Mobile yakaramba kudzorera muripo wake.
Sekureva kwePew Report nyowani, 8 muzana yevashandisi veinternet, kana vangangoita mamirioni gumi nemaviri vakuru veAmerica, chengeta blog. Makumi matatu nemapfumbamwe muzana evashandisi veinternet, kana vangangoita mamirioni makumi mashanu nemanomwe evakuru veAmerica, verenga mablog - kuwedzera kwakanyanya kubvira kudonha kwa12.
Icho poindi cheichi ndechekuti vatengi kutarisisa spans kuri kuwedzera, kwete kubvumirana. Nekudaro, kutarisisa kwavo kuri kutendeuka kubva kune yepakati svikiro, kushambadzira kushambadzira, uye PR uye kuri kutendeukira kunharaunda uye neshoko-remuromo.
Semushambadzi, ibasa rako kudzidza kudzidzira vatengi kuburikidza neaya matekinoroji matsva nemasvikiro. Kana iwe ukaedza kurwa navo, hautongokunda. Vatengi vari kubhadhara zvakanyanya kutarisisa kupfuura zvavaimboita, vane zvirinani zviwanikwa kupfuura zvavakamboita
Tags: nzevenguva yekutarisisaKureba
Jack Welch Akashata
Jul 26, 2006 na11: 21 PM
Heano mumwe muenzaniso wakanaka, uyu kubva kuThiketMaster:
Jul 27, 2006 na3: 16 PM
Uye imwe kubva kuBhangi reAmerica!